कस्ले दिन्छ न्याय नर्भिक ? अस्पतालले मेरो 'सर्बस्व लुट्यो’(भिडियोसहित)
काठमाण्डौ । '१२ हजारमा निको हुन्छ भनिएको समस्या १२ लाख सकियो, अहिले त अस्पताले नै लेखेट्न थाल्यो'
‘अस्पताल भनेको मन्दिर हो र डाक्टर भगवान हुन’ जाजरकोटका देवबहादुर ठकुरीलाई यस्तै लाग्थ्यो । तर उनीसँग भएको त्यो आस्था र विश्वास त्यतिबेला भंगभयो जतिबेला उनी राजधानीकै नाम चलेको नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालमा बेडमा पुगे ।
जाजरकोटबाट सानो समस्या लिएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भनिएको नर्भिक अस्पताल पुगेका ठकुरी अहिले अस्पतालको दोस्रो तलाको बेडनम्बर २३० मा जीवनरक्षाको आशामा लम्पसार परिरहेका छन् । अत्यधिक च्यापेर होला त्यतिराम्रो बोल्न सक्दैनन । आँखा गडेका छन् । कस्ले दिन्छ न्याय नर्भिक ?
सर्खेतको औषधीपसलेको सल्लाह अनसुसार घुडा सुनिएर उपचार गर्न राजधानीसम्म आइपुगेका ठकुरीको देव्रे गोडामात्रै सुन्निएको थियो । देव्रे गोडाको उपचार गर्ने क्रममा चिकित्सकले दाइने खुट्टाको मासु काटेर देव्रे गोडामा हालेका थिए ।
उनको देब्रे गोडा त निको भएन नै अहिले मासु काटेको दाइने गोडाको मासुपनि झर्न थालेको छ । सेतो कपडाले नदेखिने गरि बाँधेर राखिएको छ । निको हुन्छ चिन्ता नलिनु भनेको चिकित्सकले अहिले अस्पताल छाडेर जान निर्देशन दिइरहेको छन् । ठकुरीको उपचारमा चिकित्सक प्रविण नेपालले जिम्मा लिएका छन् ।
ठकुरीले सुन्निएको खुट्टा निको पार्न १२ लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छन् । गाउँको शहरकारीबाट १९ प्रतिशतका दरले ऋण निकाल्दै उपचार गरिरहेका ठकुरीको अब त त्यो बाटो पनि बन्द भएको छ । उनका नाममा हरेक दिन बेड चार्ज १६५० थपिने गरेको छ । डाक्टरको फिस अरु शुल्क जाडेर अस्पताले मात्रै हरेक दिन ३ हजारभन्दा बढी जोड्ने गरेको छ । औषधीको खर्च छुट्टै छ ।
दुखाइ कम गर्ने औषधी दिइएको छ । बेला–बेला सिस्टरले हेरबिचार गर्छन् । दुखाई कम भने भएको छैन । बेला–बेला ‘आइया–आत्थो’ गरिनै रहन्छन् । अनि ‘के भो’ भनेर सिस्टर पुग्छन् । औषधी खुवाउने समय सम्झाउँछन् । ब्लडप्रेसर जाँचेर फर्किन्छन् । पछिल्लो उपचार त्यतिमा सिमित भएको छ ।
सद्दे श्रीमानलाई अस्पताल ल्याएकी कुरुवा श्रीमति प्रतिमा सिंहका आँखा पनि ओभाएका छैनन । ‘हिजोसम्म श्रीमानको घाउँ पाक्दा मात्रै मन दुखिरहेको थियो आज डाक्टरको भनाई मुटुमा नै घोच्न थालेको छ ।’ श्रीमति सिंहले भनिन ।
बविता ढकाल / नेपाल पाटीबाट ।